Elementary for Professionals
Pre-intermediate for Professionals
Intermediate for Professionals
Business English Certificate by Cambridge Assessment English
Professional Certificate in Franchising Management
Professional Certificate in Warehouse Management
Professional Certificate in Operations Management
Certificate in Applied Statistical Analysis
Certificate in Oracle Primavera Basic Project Management Scheduling Software
Certificate in Six Sigma
Certificate in Human Resources Management in Practice
Start Date : 16-March-2021
End Date : 30-June-2021
Schedule : ZOOM Discussion Schedule – Tuesday (6:30 PM to 8:30 PM)
Class Code : S1ST-OBM-02-01-Online
Place : Lecture Videos + Online Workshops,
Lecturer : Dr. Daw Ohnmar Myint - Ph.D (HRM, Delhi), M. Com, B. Com (Hons) (YIE),
Lecturer : Daw Aye Aye Win, M.A (Int'l Business Studies) (Sophia), M. Com, B. Com (Hons) (YIE), Dip in English,
Lecturer : U Aung Chit Khin - Founder & President, MBA (Nottingham), PG Dip M, Dip M (CIM, UK),
Lecturer : Prof. Dr. Daw Hla Myint - D.Litt (YIE), M.Com, B.Com (Hons, YIE),
Lecturer : Daw Htay Htay Myint - M. Com, B.Com (Hons, YIE),
Lecturer : OBM Course Outline,
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ကိုင်လိုသူများနှင့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် SFU Certificate in Own Business Management (Online) သင်တန်း ကိုစတင် ဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။
သင့်လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့ နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေပါ။
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်အနေဖြင့် မိရိုးဖလာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲလာရာမှတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသော စီးပွားရေးဈေးကွက်တွင် မိမိလုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေဖို့ လိုအပ်လာပါသည်။
Strategy First တွင် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေသူများအတွက် Certificate in Own Business Management (Manage your Business) (Online) သင်တန်း ကိုအွန်လိုင်း သီးသန့် ဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။
မိမိ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများကိုစနစ်တကျ ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲ?
ဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးများမှလည်း လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် မိမိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် လိုအပ်သောစွမ်းဆောင်ရည်များ ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာသဘောတရားများ၊ စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုများ နှင့် မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ အရှုံးအမြတ်စာရင်းတွေ၊ ဈေးကွက်တွင် ထိုးဖောက်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်သော ကြော်ငြာများ နှင့် အရောင်းမြှင့်တင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ များကို လည်းသင်ကြားပေးသွားပါမည်။ ထို့အပြင် လုပ်ငန်းထဲတွင် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် လည်ပတ်ခြင်းဆိုင်ရာသဘောတရားများ၊ ဝန်ထမ်းပိုင်ဆိုင်ရာ ရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်းအကြောင်းများကို သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးမှ အတွေ့ကြုံရှိ ဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးများမှ Lecture Videos + Workshops (ZOOM) များ ဖြင့် သင်ကြားပေးသွားပါမည်။ သင်တန်းတက်ရောက် ရမည့်ပုံစံ သည် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် မိမိတို့ အဆင်ပြေသော အချိန်တွင် ကြိုတင်ရိုက်ကူးထားသည့် သင်ခန်းစာ Video များကို ကြိုတင်လေ့လာရမည်ဖြစ်ပြီး ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းဆီအလိုက် လက်တွေ့ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ဆွေးနွေးနိုင်မည့် Face to Face Online Workshop အတန်းချိန်များကို Online မှ ZOOM ဖြင့် တက်ရောက်ပေးရပါမည်။
သင်ကြားပေးမည့် ဘာသာရပ်ခေါင်းစဉ်များနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ -
Certificate in Own Business Management (54 hours)
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဒေါ်လှ မြင့် , B. Com (Hons), M. Com, D.Litt (YIE)
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဥမ္မာမြင့်, Ph.D. (HRM, Delhi), M. Com, B. Com (Hons, YIE)
ဒေါ် ဌေးဌေးမြင့် , M. Com, B. Com (Hons, YIE)
ဒေါ်အေးအေးဝင်း , M.A (Int’l Business Studies, Sophia University , Japan), M. Com, B. Com (Hons, YIE), Diploma in English
5. Marketing Management,
Strategies for entrepreneurs,
ဦးအောင်ချစ်ခင်, MBA (Nottingham), PG Dip M, Dip M (CIM, UK) Founder/ President (Strategy First University)
6. Soft Skills for Leader
သင်ကြားမှုပုံစံ (Lecture Videos + Online Discussion Workshop)
“သင်ခန်းစာများကို Online Only ဖြင့် သင်ကြား ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။”
၁။ ဘာသာရပ်တစ် ခု တွင် ဆရာကြီး၊ဆရာမကြီးများမှကြိုတင်ရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများ (၅) နာရီ စာ ကို Online တွင် (၁) ပတ်ကြာ လေ့လာပြီးပါက တစ်ဘာသာချင်းဆီအလိုက် လက်တွေ့ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ဆွေးနွေးနိုင်မည့် Face to Face online workshop အတန်းချိန် (၂) ချိန် တက်ရောက်ပေးရပါမည်။ စုစုပေါင်း ဘာသာရပ် (၆) ခုစာ အတွက် Lecture Video နာရီ ပေါင်း (၃၀) နှင့် ZOOM Discussion (၁၂) ကြိမ် (၂၄)နာရီ စာ တက်ရောက်ရပါမည်။
စုစုပေါင်း သင်တန်းကာလ ကြာ ချိန် မှာ (၃လ) ကြာမြှင့်ပါမည်။
သင်တန်းစတင်တက်ရောက်ရမည့် အတန်းချိန် အသေးစိတ်
Starting Date - (16 February 2021 to May 2021)
ZOOM Discussion Schedule – Tuesday (6:30 PM to 8:30 PM)
(ဘာသာရပ်တစ်ခုကို ZOOM Workshop နှစ်ချိန်သာတက်ရောက်ရပါမည်။ Soft Skills For Leader ဘာသာရပ်အတွက် အတန်းချိန်တစ်ချိန်သာတက်ရောက်ရပါမည်။)
Own Business Management Online သင်တန်းအပ်နှံပုံအသေးစိတ်ကိုတော့ https://sway.office.com/dfbgOiO9INvoqFZa?ref=Link တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
*သင်တန်းကြေးများကို အရစ်ကျ (၂)ကြိမ် ခွဲသွင်းနိုင်ပါသည်။
*သင်တန်းကြေးကို အထူး အဆင်ပြေသော Online ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည့် • Wave Money • KBZ Pay • AYA Pay • Mobile Banking (AYA, KBZ, CB, Yoma) များဖြင့် လွယ်ကူစွာပေးသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
* Payment Screenshot လက်ခံရရှိပြီးပါက သင်တန်းတက်ရောက်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသေးစိတ် ပြန်လည်ပို့ပေးသွားပါမည်။
‎ 09-250717166, ‎09-250717167, ‎09-250717168, ‎09 76543 4000
သို့ ဆက်သွယ် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက် - ဆေးလိပ်၊ ဘီယာ၊ အရက်ကုမ္ပဏီများ၊ အချို့ MLM ကုမ္ပဏီများနှင့် ၎င်းတို့၏ဝန်ထမ်းများကို ဝန်ဆောင်မှုမပေးပါ။
-မူလသင်တန်းကြေး - ၂၇၅,၀၀၀ ကျပ်။
-SFU, SFUx ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူဟောင်းအထူးစျေးနှုန်း - ၂၅၀, ၀၀၀ ကျပ်။
-SME Registration Card ရှိသူများ အထူးစျေးနှုန်း - ၂၅၀, ၀၀၀ ကျပ်။
-ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူဟောင်းများ၏သူငယ်ချင်းများ၊ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများတက်ရောက်လိုပါကလည်း သူငယ်ချင်း Refer (၁)သောင်းကျပ် သက်သာပါမည်။
-ယခုပထမဆုံးဖွင့်လှစ်သည့် OBM Online Batch -1 တွင်သင်တန်းအပ်နှံသူများသည် SFUx မှ ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းကြေး (၈၈,၅၀၀)ကျပ် ရှိသော Certificate in Entrepreneurships and New Venture Creation သင်တန်းကိုအခဲမဲ့တက်ရောက်ခွင့်ရရှိပါမည်။
-SFU OBM L2, L3 , SFUx DBME,SQA DBME တက်ရောက်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများသည် ယခု OBM Online ထပ်မံတက်ရောက် လို ပါက သင်ခန်းစာများတူညီမှုရှိသောကြောင့် သင်တန်းကြေး (၂၉,၅၀၀) ကျပ်သာ သွင်းပြီးထပ်မံတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ (ကျောင်းသားဟောင်းများအတွက် SFUx Certificate in Entrepreneurships and New Venture Creation အတန်းခံစားခွင့်မရှိပါ။)
Professional Diploma in Business Management and Entrepreneurship
Professional Diploma in Strategic Management and Leadership
Myaynigone Teaching Centre 1 :No.8, Ground Floor, Panchan Tower, Bargayer Road, Myay Ni Gone, San Chaung Township, Yangon.
Myaynigone Teaching Centre2:No.239, Pyay Road (near Myay Ni Gone City Mart), San Chaung Township, Yangon.
Myaynigone Teaching Centre3:No.237, Corner of U Wizara Raod and Dhamazedi Road, San Chaung Township, Yangon.
Myaynigone Teaching Centre4:No.265,Pyay Road, Sanchaung Township, Yangon.
Hledan Teaching Centre :No.575, Pyay Road, Helden, Kamayut Township, Yangon.
Sule Teaching Centre :No.142, 146, Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon.
Phone:09-250717166 ~ 68